Kenya oo wada-hadallo la billowday Somaliland xilli ay xiisad kala dhaxeyso DF – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya oo wada-hadallo la billowday Somaliland xilli ay xiisad kala dhaxeyso DF
Kenya oo wada-hadallo la billowday Somaliland xilli ay xiisad kala dhaxeyso DF
Beegsonews– Dowladda Kenya ayaa wada-hadallo hoose kula jirta Somaliland, xilli ay xiisad ku saabsan badda Soomaaliya, kala dhaxeyso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), oo sheegay in wada-hadallada labada dhinac ay ku saabsan xiriirka labada Dal.
Faratoon ayaa shaaca ka qaaday in wada-hadallada cusub ay ku saabsan yihii sidii Kenya ay xafiis diblomaasiyeed uga furan lahayd magaalada Hargeysa.
“Baryahanba Dawladda Kenya wada hadalo ayaa noo socda, in halkan Xafiis ka furtaan, in xidhiidhkayagu sii kordho, ayaanu rajaynaynaa, laakiin wax kama dambaysa ah oo la gaadhay oo aan hadda ku dhawaaqi karayaa ma jiraan” ayuu yiri Faratoon.
Kenya ayaa muddo diidaneyd inay xafiis diblomaasiyeed ka furato magaalada Hargeysa, ayada oo diidan inay dhaawacdo xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Si Itoobiya oo kale, kenya ayaa rabta iney ka furato xafiis qunsulyadeed maagaalada Hargeisa inkastoo xafiis kasta oo ay ka furato kenya Hargeisa ay dowlada Somalia u arki karto Xafiis siyaasadeysan hadana waxaa laga yaaba iney furtaan xafiis Qunsuliyadeed, madaama aysan haysan xafiis qunsul dadka kenyaan ah ee ka shaqeeya Hargeisa oo Aad u badan Si uu ugu shaqeeyo una Fududeydiyo wada socodka laba dal.
Previous articleJubbaland “Kenya bixitaankeeda naguma wargelin balse anagaa qorshe la imaaneyno”
Next articleSwairro:-Madaxweyne Farmaajo Oo Booqday Dhaawacyada Weerarkii Ka Dhacay Muqdisho